Kedu ihe bụ ọkụ nke San Telmo? | Netwọk Mgbasa Ozi
Foto: Blog Aero Hispano
N’oge ochie, ọ bụrụ na ị na-akwọ ụgbọ mmiri ọtụtụ mgbe, ọ ga-adịrị gị mfe ibute ihe mechara kpọọ Ọkụ nke San Telmo, ọkụ ahụ nke yiri ka ọ naghị anyụ ọkụ ma nye gị ohere ịga n’ihu n’agaghị enwe nnukwu nsogbu.
Ma, Gịnị ka ọ bụ n’ezie na kedu ka esi hibe ya?
Enwere ike ịkọwa ọkụ nke San Telmo ihie ahụ na-enwu dị ka ọkụ nke na-amịpụta site na igwe n'oge oke ifufe. Ọkụ ndị a, n'adịghị ka ọkụ ọkụ ọkụ, enweghị ntụziaka a kapịrị ọnụ, enwere ike ịhụ ya ọtụtụ nkeji mgbe ha pụtara. Ya mere, ọ bụghị ụdị ọkụ ọkụ ọ bụghị ọkụ (n'eziokwu, ọ bụ plasma). Enyere ya aha ahụ n'ihi na San Telmo bụ akwọ ụgbọ mmiri ụkpụrụ, onye na-echebe ha.
Enwere ike ịchọta ya site na ọkụ eletrik nke ikuku, ọ na-emekwa na ntụpọ nke ihe toro ogologo, ya bụ, na masts, nku ụgbọ elu, na ogwe osisi, n'etiti ndị ọzọ. Ihe a na - eme mgbe oke ifufe mepụtara mpaghara eletriki dị otú a na ọ nwere ike ionizing ikuku. Ionization bụ ihe ọhụụ nke ọ na-emepụta na electrically ebubo atọm ma ọ bụ ụmụ irighiri n'ihi enweghị ma ọ bụ ngafe nke elektrọn na-akwanyere a molekul na-anọpụ iche. Mgbe ọdịiche dị n’etiti otu na nke ọzọ dị elu, ọkụ na-enwu nke Fire nke San Telmo na-apụta.
Ọ bụ ezie na ọ naghị akpata mmerụ ahụ, a maara ikpe nke ndị nwụrụ. Na May 6, 1937, mmadụ 36 nwụrụ na zeppelin ahụ Hindenburg. Nke a bụ n'ihi hydrogen e jibu emejupụta ha nwere nnukwu ihe ọkụkụ.
Ma ugbu a, ọ bụrụ na ịnwere ijide ụgbọ elu ma ọ bụ ụgbọ mmiri na Fire nke San Telmo jidere gị ... tranquilo, ma nwee obi ụtọ na ya, ọdachi adịghị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ọkụ nke San Telmo: gịnị bụ ihe ahụ?
Oké Ifufe. Achọrọ m ịbụ oké ifufe chaser